यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओमा उपासना पौडेल नियुक्त, बीमा क्षेत्रको इतिहासमै पहिलो महिला सीईओ बन्न सफल « Aarthik Sanjal यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओमा उपासना पौडेल नियुक्त, बीमा क्षेत्रको इतिहासमै पहिलो महिला सीईओ बन्न सफल – Aarthik Sanjal
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओमा उपासना पौडेल नियुक्त, बीमा क्षेत्रको इतिहासमै पहिलो महिला सीईओ बन्न सफल
१९ बैशाख २०७८, आईतवार १५:५७
काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मा उपासना पौडेल नियुक्त भएकी छिन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई आगामी चार वर्षका लागी इन्स्योरेन्सको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो ।
यससँगै उनी बीमा क्षेत्रको इतिहासमै प्रथम महिला सीईओ बन्न सफल भएकी छिन् । साथै, अर्कोतर्फ हालसम्मकै कम उमेर अर्थात ३४ वर्षको उमेरमा उक्त गरिमामय पदमा नियुक्त हुन सफल भएकी छिन् ।
नवनियुक्त सीईओ पौडेलसँग बीमा क्षेत्रको विगत एक दशक भन्दा बढि कार्यानुभव रहेको छ । यसअघि उनले यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमै निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्य गर्दै आएकी थिइन् ।
भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिज (एफएमएस) बाट एमबीएसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी उनी भारतमा नै बीमा व्यवसयाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् ।
उनको कार्य सम्पादन प्रति सन्तुष्ट कम्पनीले उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको प्रगति सन्तुष्ट ग्राहक तथा दक्ष जनशक्तिबाट संभव हुने कुरामा विश्वास लिने उनी कर्मचारीको टीम वर्कलाई विशेष ध्यान दिन्छिन् । युनाइटेडमा उनको प्रवेशसँगै कम्पनी निरन्तर अगाडि बढिरहेको थियो र उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्त भएसँगै इन्स्योरेन्स थप उचाईमा पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
२८ बैशाख २०७८, मंगलवार १३:१३
बीमा समितिद्धारा मुद्दती निक्षेपका लागि बोलपत्र आह्वान
२८ बैशाख २०७८, मंगलवार ११:३४
आइपीओ तयारीमा रहेको रिलायबल इन्स्योरेन्सले कति कमायो नाफा ?
२८ बैशाख २०७८, मंगलवार ०९:०४
रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले २ अर्ब ३२ करोड ३४ करोड ७३ लाख कुल बीमाशुल्क आर्जन